I-BEXEL SOFTWARE-Isixhobo esinomtsalane se-3D, i-4D, i-5D kunye ne-6D BIM-Geofumed
Ikhaya/Ukuprinta kokuqala/I-BEXEL SOFTWARE-Isixhobo esichukumisayo se-3D, 4D, 5D kunye ne-6D BIM
BEXELManejala isoftware ye-IFC eqinisekisiweyo yolawulo lweprojekthi ye-BIM, kwi-interface yayo idibanisa i-3D, i-4D, i-5D kunye ne-6D imimandla. Ibonelela ngokuzenzekela kunye nokwenza ngokwezifiso ukuhamba komsebenzi wedijithali, apho unokufumana umbono odibeneyo weprojekthi kwaye uqinisekise ukusebenza kakuhle kakhulu kwinkqubo nganye yokwenziwa kwayo.
Ngale nkqubo, amathuba okufikelela kulwazi ahlukene kumntu ngamnye obandakanyekayo kwiqela lomsebenzi. Nge-BEXEL, iimodeli, amaxwebhu, iishedyuli okanye iindlela zokusebenza zingabelana, zilungiswe kwaye zenziwe ngokufanelekileyo. Oku kunokwenzeka ukubonga kwisakhiwo sayo iSMART Coordination view 2.0 certification, ukudibanisa zonke iinkqubo ezahlukeneyo ezisetyenziswa ngamalungu eprojekthi kunye namaqabane.
Inepotfoliyo yezisombululo ezi-5 kuzo zonke iimfuno. UMphathi we-BEXEL Lite, iNjineli ye-BEXEL, uMphathi we-BEXEL, i-BEXEL CDE Enterprise kunye noLawulo lweZiko le-BEXEL. Iindleko zeelayisenisi nganye kwezi zingasentla ziyahluka ngokweemfuno zakho kwaye yintoni efunekayo ngokwenene kulawulo lweprojekthi.
Kodwa usebenza njani uMphathi we-BEXEL?Inamacandelo ama-4 aneenkcukacha kakhulu kunye nezikhethekileyo zokuthatha ithuba:
I-3D BIM: apho unofikelelo kwimenyu yolawulo lwedatha, ulungiselelo lweepakethe Ubhaqo lokungqubana.
I-4D BIM: Kweli candelo kunokwenzeka ukuvelisa ukucwangciswa, ukulinganisa ukwakhiwa, ukubeka iliso kwiprojekthi, ukuphononongwa kwesicwangciso sokuqala ngokuchasene nenguqulelo yangoku yeprojekthi.
I-5D BIM: uqikelelo lweendleko kunye noqikelelo lwemali, ukucwangciswa kweprojekthi kwifomathi ye-5D, ukulandelwa kweprojekthi ye-5D, uhlalutyo lokuhamba kwezibonelelo.
I-6D BIM: ulawulo loncedo, inkqubo yolawulo lwamaxwebhu okanye imodeli yedatha ye-asethi.
Okokuqala, ukufumana uvavanyo lwesofthiwe, i-akhawunti yenkampani iyimfuneko, ayamkeli nayiphi na idilesi ye-imeyile enemimandla efana ne-Gmail, umzekelo. Emva koko ufake isicelo kwiphepha elisemthethweni le I-BEXEL idemo yovavanyo, eya kubonelelwa ngekhonkco kunye nekhowudi yokuvula ukuba kuyimfuneko. Yonke le nkqubo iyenzeka ngoko nangoko, akuyomfuneko ukulinda ixesha elide ukufumana ulwazi. Ufakelo lulula kakhulu, landela nje amanyathelo efayile ephunyezwayo kwaye inkqubo iya kuvula xa igqityiwe.
Sahlula uphononongo lwesoftware ngamanqaku esiya kuwachaza ngezantsi:
Ujongano: ujongano lomsebenzisi lulula, kulula ukuluphatha, xa uqala uya kufumana imboniselo apho unokwazi khona ukufumana iprojekthi esetyenzwe ngaphambili okanye uqale entsha. Ineqhosha eliphambili apho iiprojekthi ezintsha zibalulekile kwaye zenziwe, kunye neemenu ezi-8: Ukulawula, Ukukhetha, ukufumanisa ukungqubana, Iindleko, iShedyuli, Jonga, izicwangciso kunye ne-Intanethi. Emva koko kukho iphaneli yolwazi apho idatha ilayishwe khona (i-Building Explorer), imbono ephambili apho unokubona khona iintlobo ezahlukeneyo zedatha. Ukongeza, inoMhleli weShedyuli,
Enye yeenzuzo zale software kukuba ixhasa iimodeli ezenziwe kwamanye amaqonga oyilo afana neREVIT, ARCHICAD, okanye Bentley Systems. Kwaye, thumela ngaphandle idatha kwi-Power BI okanye kwi-BCF Manager. Ngoko ke, ithathwa njengeqonga elisebenzisanayo. Izixhobo zenkqubo zicwangciswe kakuhle ukuze umsebenzisi azifumane kwaye azisebenzise ngexesha elifanelekileyo.
Umhloli wokwakha: Yindawo yolawulo ebekwe kwicala lasekhohlo lenkqubo, yohlulwe ngokweemenyu ezi-4 ezahlukeneyo okanye iithebhu (izinto, ulwakhiwo lwesithuba, IiNkqubo, kunye neSakhiwo seSeti yoMsebenzi). Kwizinto, zonke iindidi eziqulethwe yimodeli ziyabonwa, kunye neentsapho. Inento engaqhelekanga xa ubonisa amagama ezinto, izahlula nge (_) igama lenkampani, udidi, okanye uhlobo lwento.
I-nomenclature yedatha inokutshekishwa ngaphakathi kweprogram. Ukufumana nayiphi na into, nqakraza nje kabini kwigama kwiqela lenjongo kwaye imboniselo iya kubonisa ngoko nangoko indawo leyo. Ukuboniswa kwedatha kuxhomekeke kwindlela izinto ezenziwe ngayo ngumbhali.
Wenza ntoni uMhloli weZakhiwo?
Ewe, umbono wale phaneli kukunika umsebenzisi uphononongo olupheleleyo lwemodeli, apho kunokwenzeka ukuba uchonge zonke izinto ezingalunganga ezinokubonwa, ukuqala ngokuphononongwa kwezinto zangaphandle ukuya kwezo zangaphakathi. Ngesixhobo esithi "Hamba imodi" banokubona izinto zangaphakathi zezakhiwo kunye nokuchonga zonke iintlobo "zeengxaki" ekuyilweni.
Ukwenziwa koMfanekiso weDatha kunye noPhononongo: iimodeli eziveliswa kwi-BEXEL ziluhlobo lwe-3D, enokuthi yenziwe kuyo nayiphi na enye iplatifomu yoyilo. I-BEXEL ilawula ukudalwa kweemodeli nganye kwiifolda ezahlukeneyo ezinamazinga aphezulu oxinzelelo. Nge-BEXEL, umhlalutyi unokuvelisa zonke iintlobo zemiboniso kunye nezithombe ezinokudluliselwa okanye ukwabelana nabanye abasebenzisi okanye iinkqubo. Unokudibanisa okanye uhlaziye idatha yeprojekthi ebonisa ukuba yeyiphi ekufuneka ilungiswe.
Ukongezelela, ukuphepha iimpazamo kunye nokuba amagama azo zonke izinto zilungelelaniswa, le nkqubo inikezela ngemodyuli yokufumanisa ungquzulwano eya kubonisa ukuba zeziphi izinto ezimele ziqinisekiswe ukuphepha iimpazamo. Ngokumisela iimpazamo, unokwenza kwangaphambili kwaye ulungise oko kuyimfuneko kwizigaba zokuqala zoyilo lweprojekthi.
IJongo ye-3D kunye neSicwangciso sokuJonga: Inikwe amandla xa sivula nayiphi na iprojekthi yedatha ye-BIM, kunye nayo imodeli iboniswa kuzo zonke ii-angles ezinokwenzeka. Ukongeza kumbono we-3D, imodeli ye-2D yokubonisa, imbono ye-ortographic, imbono ye-3D yeKhowudi yoMbala, okanye i-Ortographic Color Coded View, kunye nombukeli weprogram nazo zinikezelwa. Ezimbini zokugqibela ziyasebenza xa imodeli ye-BIM ye-3D yenziwe.
Iimbono zesicwangciso nazo ziluncedo xa ufuna ukuchonga iimpawu ezithile, okanye ukhangele ngokukhawuleza phakathi kwemigangatho yemodeli okanye isakhiwo. Kwi-2D okanye isicwangciso sokujonga ithebhu, imodi ethi "Hamba" ayinakusetyenziswa, kodwa umsebenzisi usenako ukuhamba phakathi kweendonga kunye neengcango.
Izixhobo kunye neePropati
Iphalethi yezinto eziphathekayo ivuliwe ngokuchukumisa nayiphi na into ekhoyo kwimboniselo ephambili, ngokusebenzisa le panel, zonke izinto ezikhoyo kwizinto ezinokuthi zihlalutywe. Iphalethi yeempawu nayo yenziwe yasebenza ngendlela efanayo nephalethi yezinto.Zonke iimpawu zezinto ezikhethiweyo ziboniswa kuyo, apho zonke iimpawu zohlalutyo, izithintelo, okanye imilinganiselo igqame ngeblue. Kuhlala kunokwenzeka ukongeza iipropati ezintsha.
Ukwenziwa kweemodeli ze-4D kunye ne-5D:
Ukuze ukwazi ukuvelisa imodeli ye-4D kunye ne-5D kufuneka ibe nokusetyenziswa okuphambili kwenkqubo, nangona kunjalo, ngokusebenzisa i-workflows imodeli ye-BIM ye-4D / 5D iya kwenziwa ngaxeshanye. Le nkqubo iqhutyelwa ngaxeshanye ngokusebenzisa umsebenzi obizwa ngokuba yi "Creation Templates". Ngokufanayo, i-BEXEL inikezela ngeendlela zendabuko zokudala olu hlobo lomzekelo, kodwa ukuba into oyifunayo kukudala ulwazi ngokukhawuleza nangempumelelo, ukuqhutyelwa komsebenzi okucwangcisiweyo kwinkqubo ikhona.
Ukwenza imodeli ye-4D / 5D, amanyathelo alandelayo: ukudala ukuhlelwa kweendleko okanye ukungenisa enye yangaphambili, ukuvelisa inguqulo yeendleko ngokuzenzekelayo kwi-BEXEL, yenza iishedyuli ezintsha ezingenanto, dala iindlela, dala "Iimpawu zokudala" , lungisa ishedyuli kunye ne-BEXEL. iwizard yokudala, phinda ujonge oopopayi beshedyuli.
Onke la manyathelo alawuleka kuye nawuphi na umhlalutyi owaziyo malunga nesifundo kwaye ngubani na ngaphambili owadala imodeli enjalo kwezinye iinkqubo.
Iingxelo kunye neeKhalenda: Ukongeza koku kungasentla, uMphathi we-BEXEL unika ithuba lokuvelisa iitshathi zeGantt zolawulo lweprojekthi. Kwaye i-BEXEL inikezela ngengxelo nge-portal yewebhu kunye nemodyuli yokulungisa ngaphakathi kweqonga. Oku kubonisa ukuba zombini ngaphandle nangaphakathi kwinkqubo umhlalutyi unalo ithuba lokuvelisa la maxwebhu, njengeengxelo zemisebenzi.
Imodeli ye-6D: Lo mzekelo yi-Digital Twin "I-Digital Twin" eveliswe kwindawo ye-BEXEL yoMphathi weprojekthi echongiweyo. Eli iwele liqulethe zonke iinkcukacha zeprojekthi, zonke iintlobo zamaxwebhu ahambelanayo (iziqinisekiso, iimanyuwali, iirekhodi). Ukwenza imodeli ye-6D kwi-BEXEL kufuneka kulandelwe amanyathelo ambalwa: yenza iisethi zokukhetha kunye namaxwebhu ekhonkco, udale iipropati ezintsha, ubhalise amaxwebhu kwaye uchonge kwi-palette yamaxwebhu, udibanise idatha kwi-BIM, yongeza idatha yekhontrakthi, kwaye wenze iingxelo.
Enye inzuzo kukuba uMphathi we-BEXEL unikezela nge-API evulekileyo apho iintlobo ezahlukeneyo zemisebenzi zinokufumaneka kwaye yintoni eyimfuneko inokuphuhliswa ngokucwangcisa ngolwimi lwe-C #.
Inyaniso kukuba kunokwenzeka ukuba abaninzi abachwephesha kwindawo yokuyila ababhaptizwe kwihlabathi le-BIM abaqapheli ubukho besi sixhobo, kwaye oku kube ngenxa yokuba inkampani efanayo igcine le nkqubo kuphela kwiiprojekthi zakho. Nangona kunjalo, ngoku bakhuphe esi sisombululo eluntwini, esifumaneka ngeelwimi ezininzi kwaye kunjalo, njengoko bekubonisiwe ngaphambili, sinesiqinisekiso se-IFC.
Ngamafutshane, sisixhobo esomeleleyo - ngendlela elungileyo - nangona abanye benokuthi iphucuke kakhulu. UMphathi we-BEXEL ulungele ukuphumeza kulo lonke ixesha lobomi beprojekthi ye-BIM, i-database esekelwe kwifu, ubudlelwane boxwebhu kunye nolawulo, ukubeka iliso kweeyure ezingama-24, kunye nokudibanisa namanye amaqonga e-BIM. Banamaxwebhu amahle malunga nokuphatha umphathi we-BEXEL, enye ingongoma ephambili xa uqala ukuyiphatha. Zama ukuba ufuna ukuba namava olawulo lwedatha yeBIM ebalaseleyo.
ArcGIS - Soluciones para 3D
I-Supermap-isisombululo esibanzi se-2D kunye ne-3D GIS
Ukuvakala komsindo kunye nevidiyo kunye ne-Screencast-o-matic kunye ne-Audacity.
Inkqubo enhle yokugcina isikrini kwaye uhlele ividiyo
Umbukeli weTatukGIS… umbukeli omkhulu
Imodeli yeSketchup AulaGEO iveza ikhosi yokumodela ye-3D ngeSketchup, sisixhobo sokuqonda zonke iifom zokwakha ...